Luis Suarez Oo Uga Digay Xavi Inuu Barcelona Tababare Ka Noqdo, Talo Caqligal Ah Uu U Soo Jeediyay & Luis Enrique Oo Ku Jeesjeesay Joan Laporta - Laacib
HomeWararka CiyaarahaLuis Suarez Oo Uga Digay Xavi Inuu Barcelona Tababare Ka Noqdo, Talo Caqligal Ah Uu U Soo Jeediyay & Luis Enrique Oo Ku Jeesjeesay Joan Laporta
Luis Suarez Oo Uga Digay Xavi Inuu Barcelona Tababare Ka Noqdo, Talo Caqligal Ah Uu U Soo Jeediyay & Luis Enrique Oo Ku Jeesjeesay Joan Laporta
Weeraryahankii hore ee Barcelona haatana u ciyaara kooxda Atletico Madrid ayaa uga digay Xavi Hernandez inuu tababare ka noqdo Barcelona waqti xaadirkaan isagoo kula taliyay inuu sugo waqti munaasab ah oo uu hogaamin karo kooxda.
Barcelona ayaa ku jirta xaaladii ugu xumeyd, iyadoo tababare Ronald Koeman uu qarka u saaran yahay in la ceyriyo ka dib xasuuqii xalay ka soo gaaray Benfica tartanka Champions League.
Luis Suarez iyo Xavi Hernandez ayaa isla joogay Barcelona xilli ciyaareedkii 2014-15, wuxuuna kula taliyay saaxiibkiisii hore inuu haatan ka baaqsado inuu tababare ka noqdo Camp Nou madaama Barcelona uu dagaal ka dhex socdo.
Luis Suarez ayaa u sheegay jariirada Sport: “Barcelona waxaa ka jira dagaal dhaawaca ciyaartoyda. Waxaa shaqsiyan kula talinayaan Xavi inuu sugo. Haatan ma ahan waqtigii uu kooxda ku soo laaban lahaa. Waa nin caqli badan, wa aqasab inuu sugo in cabaar ah.”
Dhanka kale tababarihii hore ee Barcelona Luis Enrique haatana macalin u ah xulka Spain ayaa lala xiriirinayay inuu shaqada Camp Nou ku soo laabanayo, balse Enrique ayaa jawaab jees-jees ah bixiyay.
“Uma maleynayo in Joan Laporta uu xitaa heysto lambarkeyga … kama tagayo xulka qaranka Spain. Qandaraas ayaan halkaan ku joogaa, Spain ayaana i baahan, waana ixtiraamayaa taas.” ayuu yiri.
Tababare kale oo Barcelona lala xiriirinayo waa xiddigii hore ee Juventus Andrea Pirlo kaasoo la sheegay in madaxweynaha kooxda Joan Laporta uu aad u jecel yahay, balse sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Talyaaniga, weli Barcelona xiriir lama sameynin tababarihii hore ee Bianconeri.